विवरण: प्ले मारियो Bros ध्वनि विश्व अब, SEGA ध्वनि खेल आधारमा अत्यधिक लोकप्रिय क्लासिक मंच को एक फ्लैश क्लोन मा।
खेल्नु: 141,304 ट्याग: कार्य, मारियो, ध्वनि
शानदार चार: यंत्रीकृत maelstrom
डाक्टर डुम एक पटक फेरि उत्कृष्ट चार देखि हाम्रो नायक नष्ट गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यो समय, त्यो रोबोट को एक सेना प्रयोग गर्न चाहन्छ। प्रत्येक स्तर को सुरुमा तपाईं दुई टोली सदस्य यो धूर्त शत्रु विरुद्ध लड्न गर्ने छनौट गर्न सक्षम हुनेछ।
पश्चिमी अगाडि 1914
ब्रिटिश शाही सेना वैज्ञानिकहरूले एक cybernetic सुपर सैनिक सिर्जना को एक परियोजना विकास र अन्तमा आफ्नो विचार कार्यान्वयन। यी सैनिकहरू धेरै शक्तिशाली र साधारण मान्छे भन्दा हार्डी छन्। नमूनों को एक battlefi पठाइएको छ
कार्य शूटर मृत्यु मा रश यसलाई चलान र विदेशी शत्रुहरू chasing शहर छत मा कूद आफ्नो कार्य हो। हतियार आफ्नो रुचि चयन गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सबै मार!
megaman लड्न शूटिंग
Megaman उहाँले अगाडि झूठ चुनौतिहरु, शत्रुलाई सेवा प्ले छैन सामना गर्न आफ्नो उद्देश्य जाँच्नका र चकमा गर्न चपलता देखाउन तयार छ भनेर देखाउने आवश्यक छ।
विदेशी आक्रमण टोली
विदेशी शक्तिहरू पृथ्वीमा आक्रमण गरेको नाश गर्न आफ्नो टीम बाँकी संग सामेल! आफ्नो चरित्र निजीकरण गर्ने र लेजर दृष्टि सहित एड अनहरू, र एक ढाल संग हथियार को आफ्नो व्यापक एरे स्तरवृद्धि गर्नुहोस्।
किम संयुक्त राष्ट्र taser
किम अन पुलिस देखि बात यति धेरै लिएर पछि उहाँलाई tase गर्न, किम भाग्ने पनि अवरोध बोनस स्कोर लागि रमाइलो, लिनु फल र सिक्का लागि बाहिर हेर्न मदत गर्न अब यसको आफ्नो पालो chasing छन्!
Spongebob Squarepants: वसन्त कदम
Spongebob वसन्त परिणत कार्य एक हास्यास्पद Spongebob खेल एपिसोड। सँगैका वसन्त र आफ्नो PAL पैट्रिक केही jellyfish ल्याउन। यो सिद्ध jellyfishin मौसम हो र पैट्रिक केही जेली चाहन्छ।